Guri Iibso Oo Hel Xaas Bilaash ah Yaabka Adduunka: (qiso dhabanno-hays Noqotay) | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Guri Iibso Oo Hel Xaas Bilaash ah Yaabka Adduunka: (qiso dhabanno-hays Noqotay)
Maalinba maalinta ka dambaysa dunida waxa kusoo kordhaya tabo iyo xeelado ay adeegsanayaan dadka xarfaanta ku ah Suuq-geynta, waxana caalamka laga hadal hayaa dhacdo arrimahaas la xidhiidha oo markhaati laga noqday.
Tartanka loogu jiro hanashada macaamiisha caalamka, ayaa heerkii ugu sarraysay gaadhay, waxana soo jidashadooda lagu bixinayaa wax kasta oo ay kusoo istaagi karaan.
Haddaba sheeko la xidhiidha suuq-geynta oo uu daabacay warsidaha The Mirror toddobaadkan ayaa ka yaabisay dadkii maqlay iyadoona dhabano heys ay ku noqotay dadka ka baayac mushtara suuq-geynta madaama haweeney u dhalay dalka Indonesia ay lasoo baxday tab ka duwan qaababka lagu yaqaan suuq geynta.
Iyadoona, warsiduhu daabacay sheeko ah in haweeneydan ay dooneyso in ay iska iibiso gurigeeda isla markaana qofkii iibsadaa gurigan uu si xor ah ku guursan karo iyada.
Guriga haweeneydan oo 40 jir ah ayaa ka kooban dabaq hal biyaano ah taas oo leh labo qol oo jiif ah labo suuli, meel baabuurka la dhigto ama (Parking) iyo weliba barkad lagu xanaaneeyo kaluunka noocyadiisa kala duwan.
Rumah Dijual oo ah qofka ay haweeneydan u xil saaratay suuq geynta gurigan ayaa Internet ku baahiyay qoraalka sheekadan isagoona ciwaan kaga dhigay “Iibso guri, Islam-markaana guurso mulkiilaha guriga.”
Lie ayaa mar wax laga weydiiyay sheekadan waxay arinkan u xaqiijisay TV xaruntiisu tahay isla dalka Indonesia, waxay sheegtay in arintani aabat ahayn kaftan, iyadoona hadalkeeda intaa ku dartay in ay daneemeyso guursiga nin walbo oo iibsada gurigeeda qofkuu doonaba ha ahaadee.
Haweeneydan ayaa sidoo kale warbaahinta u sheegtay in hadafkeeda ugu weyn uu yahay sidii ay ku heli lahayd lamaane nolosha la wadaaga madaama muddo dhan shan iyo toban sano ay ahayd CARMAL ka dib markii uu ninkeedu ka dhintay sanadkii 2000.
Si kastaba, qiimaha gurigan ayaa ah 999mn oo rubi una dhiganta qiimo dhan 75 kun oo doolarka mareekanka ah ($75,000).